दुई सोल्टीनी सहित दयाहाङ राई मिडियामा , भिलेन बनेर आए विल्सन बिक्रम ! ( भिडियो हेर्नुस ) – Nepal Trending
दुई सोल्टीनी सहित दयाहाङ राई मिडियामा , भिलेन बनेर आए विल्सन बिक्रम ! ( भिडियो हेर्नुस )
काठमाडौं । ‘कबड्डी’ र ‘कबड्डी कबड्डी’को सफलतापछि शुक्रबारबाट तेस्रो शृंखला चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ रिलिज हुँदै छ । मुलुकका करिब सयवटा हलबाट यो चलचित्र रिलिज हुने यसका निर्माता एवं निर्देशक रामबाबु गुरुङले बताए ।
यो चलचित्रको बिहीबार बेलुका काठमाडौंका क्यूएफएक्स कुमारी हलमा प्रिमियर गरियो । सिनेकर्मी तथा सञ्चारकर्मीबाट चलचित्रले राम्रो प्रशंसा पायो । ‘जात्रैजात्रा’पछि यो चलचित्रले राजधानी र मोफसलमा सर्वाधिक सिनेमा हल र सो पाएको छ ।
चलचित्रको बारेमा निर्देशक रामबाबुले राजधानीसँग भने, ‘हाम्रो फिल्म सामाजिक प्रेमकथासँगै मुस्ताङका गुरुङ र थकाली समुदायको संस्कृतिप्रति पनि केन्द्रित छ । फिल्ममा हामीले कथावस्तु र कलाकारको प्रस्तुतिलाई महŒव दिएका छौं ।’यो फिल्मलाई अहिले चौथो शृंखलासम्म निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि उनले सुनाए ।
स्वजातीय विवाह र अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धको अन्तद्र्वन्द्व रहेको सिनेमामा दयाहाङ राई, कर्मा, उपासनासिंह ठकुरी, विल्सनविक्रम राईबीचको त्रिकोणात्मक प्रेम सम्बन्ध प्रस्तुत गरिएको छ । फिल्ममा दयाहाङ काजीको भूमिका र विल्सन धनकाजीको भूमिकामा छन् ।
उपासनासँग यी दुईको अन्तर्जातीय विवाहको संघर्ष फिल्ममा देखाइएको छ । उपासनासँग विवाह गर्न पछि लाग्ने अर्का युवाका रूपमा कर्मालाई प्रस्तुत गरिएको छ । यो चलचित्रमा रिश्मा गुरुङ, माओत्से गुरुङ, पुष्कर गुरुङ, कविता आले, बुद्धि तामाङ, लुनिभा तुलाधर, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, अरुणा कार्की पोखरेल, राजन खतिवडा, मणि के राई, डीबी गुरुङ, राजेन्द्र थापालगायतका कलाकारको पनि अभिनय छ ।
सिनेमामा शैलेन्द्रध्वज कार्कीको छायांकन र सुरेन्द्र पौडेलको सम्पादन छ । चलचित्रलाई रामबाबु र उपेन्द्र सुब्बाले लेखेका हुन् । बाँसुरी फिल्मस् र सिनेमा आर्टको प्रस्तुति रहेको सिनेमासँग माउन्टेन स्टोरिज र नौमती इन्टरटेनमेन्टले निर्माणमा सहकार्य गरेका छन् । मणिराम पोखरेल, अर्जुन कार्की र ओम चन्द रौनियारले लगानी गरेको सिनेमाको सहनिर्मातामा रुदेन सदा लेप्चा छन् । भिडियो हेर्नुस
खुसिको खबर ! मधुलेसँगै अगाडि बढ्न अस्विकार गरेका सागनले प्रमोदसँगै गित गाउने
पारस र सोनिका बिचको सम्बन्ध के ? सोनिकाले गरिन् यस्तो खुलासा
आफन्तबाटै घोका पाएका साजन लामा भावुक हुदै मिडियामा , खोले भित्री कारण ( भिडियो…
नेपाल आईडल बिजेता बुद्ध लामाको ” आफु भन्दा जेठी ” सार्वजनिक ( हेर्नुस…
‘बिग बोस–१३’का लागि सलमानले कति पारिश्रमिक लिदैछन् ?
रातो टिका र सारीमा बोल्ड साम्राज्ञी !! कार्यक्रममै भिडे अशोक शर्मा र शम्भुजित…